qBittorrent: Ngwa magburu onwe ya di mfe ijikwa iyi | Site na Linux
qBittorrent: Ngwa di nma ma di mfe ijikwa iyi
Linux Post Wụnye | | Aplicaciones, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Njikwa faili QBittorrent iyi
Ugbu a enwere ọtụtụ ọrụ ntanetị nke na-enye anyị ohere ịkekọrịta faịlụ n'efu na-enweghị itinye ha na igwe ojii, agbanyeghị kpochapụwo ma ụzọ dị mfe ịkọrọ ndị enyi anyị nnukwu faịlụ ọ bụla bụ ime ya site na iji ntanetị faịlụ ntanetị.
Ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla mara otu esi achọta faịlụ iyi na tontanetị iji budata ọdịnaya nke ụdị ọ bụla, ọtụtụ ndị ọrụ anaghị anwa ịmepụta iyi nke ha ma ọ bụ mee ka kọmputa ha ghọọ Torrent Server. Ya mere, Taa, anyị ga-ekwu maka qBittorrent, nke taa bụ otu n'ime ndị ahịa kachasị ewu ewu maka njikwa iyi na GNU / Linux.
Ugbu a anyị nwere ike ịmepụta faịlụ iyi ma kesaa faịlụ anyị (vidiyo, akwụkwọ ma ọ bụ onyonyo) na ndị enyi anyị ma ọ bụ ọbụlagodi ndị ọrụ communityntanetị ndị ọzọ, na-eji qBittorrent. Ma gịnị bụ qBittorrent?
1 Gịnị bụ qBittorrent?
2 Ọ bụ iwu iji qBittorrent?
3 Etu esi eji qBittorrent?
4 Atụmatụ Ugbu a
5 Otu esi emepụta mmiri iyi ma kesaa ya?
5.1 Nzọụkwụ 1: Gbaa nhọrọ "Mepụta iyi" (Ctrl + N)
5.2 2kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Wet na Torrents Creation ụdị
Gịnị bụ qBittorrent?
qBittorrent bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma ghe oghe maka GNU / Linux Operating Systems nke na - enyere anyị aka ịgbanwe ndị ọzọ n’etiti ụwa site na P2P Bittorrent protocol. Ngwa a dị ugbu a kachasị mma na ngwa ndị yiri ya na Windows, Mac OS na Linux, ebe ọ bụ multiplatform.
N'etiti ọrụ ya kachasị mma bụ njin ọchụchọ ya, nke ga-enye anyị ohere ịchọta faịlụ ndị ọzọ na-akọrọ na netwọkụ ngwa ngwa na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, qBittorrent gụnyere ihe ndọtị Bittorrent kachasị ọhụrụ na nkwalite, nke na-enye ya ohere ịrụ ọrụ nke ọma na nke ọma, ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ.
Nke kachasị mma, qBittorrent bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma ebipụta ya n'okpuru ikike GNU GPLv2, skoodu gị mepere ma dị maka mmadụ niile ma dịnụ ka a ga-eweghachi gị n'okpuru usoro ikikere a kwuru. Nke a na-eme qBittorrent, ngwa ọrụ enviable nke na-enweghị ihe ọ bụla malware, spyware, mgbasa ozi ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ na-achọghị, dịka ngwa ndị yiri ya na Sistemụ Ọrụ Ndị Onwe.
Ọ bụ ezie na anyị ga-emerịrị nke ahụ Ọ bụ ezie na a tọhapụrụ ya n'okpuru akwụkwọ ikike GNU GPLv2, ọ na-abịa na mgbakwunye nke ihe ndị a pụrụ iche:
Ọzọkwa, dị ka ihe pụrụ iche, ndị nwere nwebisiinka na-enye ikike iji jikọta mmemme a na ọbá akwụkwọ "OpenSSL" nke ọrụ OpenSSL (ma ọ bụ jiri nsụgharị gbanwere site na iji otu ikikere dị ka ọba akwụkwọ "OpenSSL") wee kesaa ndị na-eme njikọ ahụ. Must ga-erubere GNU General Public License n'ihe niile maka koodu niile ejiri na-abụghị "OpenSSL". Ọ bụrụ na ị gbanwee faịlụ, ịnwere ike ịgbatị ihe a na ụdị faịlụ (s) gị, mana ịgaghị eme ya. Ọ bụrụ na ịchọghị, wepu nkwupụta ewepu na ụdị gị.
Ọ bụ iwu iji qBittorrent?
Ọ bụ ezie na qBittorrent bụ onye ọgbọ na ibe (P2P) nkekọrịta sọftụwia, na iwu zuru oke iji ya, mana o nwere ike bụrụ ihe iwu megidere ibudata ọdịnaya ejiri sọftụwia a dabere na iwu obodo ọ bụla.
Etu esi eji qBittorrent?
qBittorrent dị mfe iji, ọ bụrụ na i jirila mmemme ndị ọzọ yiri ya, mana dị ka uru ọ nwere interface dị mfe ma ọ na-abịa n'asụsụ Spanish. Nwere a ukara website dị nnọọ irè ma jupụta na ngalaba bara uru iji kuziere anyi uzo anyi jiri ya.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ ntakịrị maka atụmatụ nke qBittorrent na mmemme yiri ya gaa na nke a gara aga blog post na isiokwu Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, gaa na nke ha Ebe nrụọrụ gọọmentị na Github.
Ọrụ onye ọrụ yiri μTorrent
Ọfụma na mgbakwunye ngwa ngwa
Na-enwe imekotaotuugbo search na ọtụtụ iyi search saịtị
Uzo choro udiri udiri ihe dika: akwukwo, egwu, ngwanro
RSS feed nri na elu download nzacha
Ime akara site na web ọrụ interface, nke e dere na AJAX, na ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka interface nkịtị.
Usoro usoro nbudata (Budata n'usoro)
Nnukwu nchịkwa nke mmiri, trackers, na ndị ọgbọ
IP nzacha (na-akwado eMule na PeerGuardian usoro)
UPnP / NAT-PMP n'ọdụ ụgbọ mmiri ebugharị nkwado
Dị na nyiwe niile: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, OS / 2
Ọ dị n’ihe karịrị asụsụ iri asaa
Nkwado maka ọtụtụ ndọtị Bittorrent dị dakọtara, dị ka:
Kesara okpokoro osisi (DHT),
Ọgbana Exchange Protocol (PEX),
Nchọpụta Ọgbọ mpaghara (LSD)
Zoro ezo njikọ
Otu esi emepụta mmiri iyi ma kesaa ya?
Nzọụkwụ 1: Gbaa nhọrọ "Mepụta iyi" (Ctrl + N)
2kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Wet na Torrents Creation ụdị
Na mbido mbụ a hụrụ n'okpuru:
Mezue nhọrọ ndị a:
:Zọ: Họrọ otu faịlị ma ọ bụ folda ga-arụtụ aka na iyi.
Ntọala: Ndepụta nke onwe "Nkeonwe" bụ nhọrọ maka ndị ọrụ tozuru etozu yana a tụrụ aro "Mkpụrụ ozugbo."
Ubi: Tinye "URL Tracker" dị ka o kwere ntụkwasị obi ma rụọ ọrụ dịka o kwere mee ma jupụta mpaghara ndị ọzọ (nhọrọ). Gaa na njikọ ndị a iji nweta "Tracker URL" emelitere.
Dị ka a hụrụ na foto ndị a:
Ugbu a, ị ga - eziga faịlụ gị mepụtara ma gosipụta njikọ na nbudata nke faịlụ ahụ na onye ọzọ. Cheta na ọtụtụ oge ọ na - ewe oge maka iyi iji gbasaa site na sava trackers ka ebudatara ya. Chetakwa na ihe ịga nke ọma nke iyi na-adị na "Tracker URLs" ndị e ji kee ya.
qBittorrent bu ezigbo onye ahia di elu ma di elu, ya mere o nwere oru di nkpa iji jikwaa nbudata. Ya interface na functionalities-elekwasị anya na nbudata iyi na anyị na-arịọ na-enweghị ọtụtụ nsogbu. N'ikpeazụ, ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, yabụ anaghị agụnye mgbasa ozi ma ọ bụ mmapụta nkwado.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » qBittorrent: Ngwa di nma ma di mfe ijikwa iyi
Ọ ga-adị mma ịgbakwunye echiche dịka Trackers, Ndị ọgbọ na ụzọ doro anya na nghọta.
Na mgbakwunye na, biko, nkuzi banyere otu esi emepụta sava na-echekwa echedoro na nkeonwe dị ka o kwere mee.
Site na mail ezitere m gị ihe ọzọ gbasara ya. Jisie na iheoma!
marian teliz dijo
Zaghachi marian teliz
hello, ndị enyi weebụ, na-ahụ okwu gị. Ọ ga-amasị m igosipụta obi abụọ m n'ihi na ụbọchị ole na ole gara aga Achọrọ m ibudata ezigbo ngwa ebe m nwere ike inwe ezigbo mma na vidiyo, egwuregwu na ihe ọzọ, ha gwara m banyere BitTorrent, mana nhọrọ kachasị mma ugbu a bụ uTorrent na ha zitere m ibe a na-akpọ download onyenze nwa amobi ndi anaturo anya , Enwere m ike inweta ihe niile m na-achọ ebe ahụ, mana ikwu eziokwu, amaghị m ihe ibe a dị ka ma ọ bụrụ na enwere ntụkwasị obi kpamkpam, m ga-achọ ka ị nye m echiche gị n'okwu a.
PDFtk: Ngwaọrụ iji kewaa faịlị PDF site na ọnụ ya